""ကိုယ်ထင်ပြသော သရဲနှင့် ဖုတ်ဝင်ခြင်း"".. ဖြစ်ရပ်မှန် (အသဲငယ်သူများ လုံးဝမဖတ်ရ)...! - APANNPYAY
/ ""ကိုယ်ထင်ပြသော သရဲနှင့် ဖုတ်ဝင်ခြင်း"".. ဖြစ်ရပ်မှန် (အသဲငယ်သူများ လုံးဝမဖတ်ရ)...!
""ကိုယ်ထင်ပြသော သရဲနှင့် ဖုတ်ဝင်ခြင်း"".. ဖြစ်ရပ်မှန် (အသဲငယ်သူများ လုံးဝမဖတ်ရ)...!
၅ နှစ်သားက မေမေက ညီလေး ကိုယ်ဝန်ကြီးနှင့် ကြမ်းပျဉ်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်၍ အိပ်နေစဉ်...။ ဖေဖေက အိမ် ရှေ့ မြေကြီးပေါ်မှာ ဓားမတစ်လက်နှင့် ထင်းတွေ ခွဲနေသည်။လင်းထက်က မေမေ့ ဘေးမှာ ဗိုက်ထဲမှ ညီလေး၏ လှုပ်ရှားမှုအား လက်ဖြင့် လိုက်စမ်း၍ ကစားရင်း ဖေဖေ ထင်းခွဲနေသည်ကို အမှုမဲ့ကြည့်နေ မိချိန်။ ထိုစဉ် လင်းထက်၏ မျက်ဝန်းထဲ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မှောင်မဲ သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ မှောင်မဲသွားသည် ဆိုသည်မှာ အိမ်ပေါ်နှင့် အိမ်ရှေ့ ကုန်းမြေကို မှုန်ဝါးဝါး တွေ့နေရသည်။ အခြားပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ကလကာ မည်းကြီး ကာထား သလို မည်းမှောင်ကျနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ် ဘုန်းကြီးကျောင်းဘက်မှ လာသော တာကန်သင်းပေါ် အမှောင်ထဲမှနေ၍ မည်းမည်း အရိပ်တစ်ခု တဖြည်းဖြည်းထွက်လာသည်ကို လင်းထက်တွေ့လိုက်သည်။ ထို မဲမဲသဏ္ဍန်ကြီးက ထင်းခွဲနေသော ဖေဖေနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် မတ်တပ်ရပ်၍ လင်းထက်တို့ အိမ်ပေါ်ကို လှမ်းကြည့်နေသည်။ လင်းထက်က မေမေ့ကို မသိမသာ လှုပ်နှိုးသော်လည်း အိပ်ဆေးမိထားသူတစ်ယောက်လို မေမေက လုံးဝ နိုးမလာ။ အရိပ်မဲကြီးက အတန်ကြာရပ်ကြည့်နေပြီး ထင်းခွဲနေသော ဖေဖေ့ဆီကို အန္တရာယ် ပြုမည့်ပုံဖြင့် လှမ်းသွားနေသည်။ ဖေဖေကတော့ ဘာမှသိပုံမရ။ကျောပေးလျက် ထင်းတွေကိုသာ အားစိုက်ခွဲနေသည်။ ....ဖေဖေ နောက်မှာ အကောင်ကြီး.... လင်းထက် အော်ဟစ်ပြီး ဖေဖေ့ကို သတိပေးဖို့ ကြိုးစားသည်။ သို့သော် လည်ချောင်းမှ ထွက်လာသည့် အသံက... .... အ....အ...အစ်....ဟူ၍ သာထွက်လာသည်။ အရိပ်မဲကြီးမှာ ဖေဖေ့နောက်ကျောကို ရောက်သွားကာ လက်နှစ်ဖက်က ဖေဖေ့ လည်ပင်းကို လှမ်းသွားပြီး ဖမ်းညှစ်နေသည်။ မျက်လုံးပြူး၍ ငြိမ်သွားသော ဖေဖေ့ကို ကြည့်၍ လင်းထက် မျက်လုံးစုံမှိတ်ချကာ ရှိသမျှအားကို သုံး၍ အာခေါင်ခြစ်၍ အော်ချလိုက်သည်။ .... အားးးးးးးးးးးးးးးးးးး.... .... သား... သား... ဘာဖြစ်တာလဲ.... မေမေ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတော့မှ မျက်လုံးအစုံကို ပြန်ဖွင့်လိုက်သည်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးက မူလအတိုင်း နေအလင်းရောင်ဖြင့် လင်းချင်းနေသည်။မေ့မေ့ မျက်နှာက စိုးရိမ်ပူပန်မှု အပြည့်နှင့် လင်းထက်ကို ကြည့်နေသည်။ ...အိမ်...အိမ်...ရှေ့မှာ မည်းမည်းကြီး.... ဖေ့ဖေ့ကို သတ်နေတာ ...သားတွေ့တယ်.... ......အော်..ဘာမှ မရှိပါဘူး... သားရယ်... နေ့ခင်းကြောင်ကြီး.....အလန့်.... မေ့မေ့ စကား တစ်ဝက်တပျက်နှင့် ရပ်သွားသည်။ အိမ်ရှေ့မြေကြီးပေါ်မှာ ခွေခွေလေး လဲနေသည့် ဖေဖေ့ ကို တွေ့လိုက်ရသည် မဟုတ်ပါလား... မေမေကော လင်းထက်ပါ အိမ်ပေါ်က ပြေးဆင်းပြီး ကြည့်တော့ ဖေဖေ့မှာ ခေါင်းတခြမ်းစောင်း၍ လဲကျနေသည်။ .... ကိုစိုးလွင်.... ကိုစိုးလွင်...ဘာဖြစ်တာလဲ... ဖေဖေ့ကို ကမန်းကတန်း ကောက်ထူ၍ မေမေ မေးလိုက်သော်လည်း ဖေဖေ မဖြေနိုင်ပါ။ ဖေဖေ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခြမ်း လေဖျန်းသွားကာ ပါးစပ်ရွဲ့နေ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တောဆေးဆရာကောင်းနှင့် တွေ့၍သာ တစ်လအတွင်း ဖေဖေ ပြန်၍ ကျန်းမာရေးကောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ကျန်းမာရေးကောင်းတော့ ဖေဖေ ပြောပြသည်က ... ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး...တစ်ယောက်ယောက်က လည်ပင်း ဖမ်းညှစ်သလို ခံလိုက်ရပြီး လဲကျသွားတာ ပဲ သိတယ်... မေမေက လင်းထက်မျက်နှာကို တအံ့တသြ လှမ်းကြည့်တာ အမှတ်ရသေးသည်။ ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကထိန်အလှူပွဲ ကျင်းပစဉ်က တစ်ခါ။ အလှူပွဲတွင် လူကြီးသူမများအား ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း ဆွမ်းကျွေးဓမ္မာရုံတွင် ထမင်းကျွေး၍ ကလေးငယ်များအား ဘုန်းကြီးကျောင်း အရှေ့ဘက် ကန်ဘောင်ကြီးရှိ ညောင်ပင်ကြီးများအောက် အရိပ်ရသော မြေကွက်လပ်တွင် မြေစိုက်ခုံတန်းများ ပြုလုပ်၍ ထမင်း ကျွေးမွေးသည်။ လင်းထက်တို့ ကလေးတစ်သိုက် အားရပါးရ စားနေကြစဉ် လင်းထက်ရှေ့ မျက်နှားချင်းဆိုင် စားနေသော ကိုရင်လေး၏ ထမင်းပန်ကန်ထဲ လက်မည်းကြီး တစ်ဖက် လာနှိုက်သည်ကို လင်းထက် တွေ့လိုက်ရသည်။ လက်ကြီးမှာ အမွေးရှည်ကြီးများနှင့်ဖြစ်ကာ ကိုရင်လေး ပန်းကန်ထဲမှ ဝက်သားတုံးများကို လှမ်းနှိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ လင်းထက်မှာ ထိတ်လန့်လွန်း သဖြင့် ထိုလက်ကြီးများအား မျက်လုံးပြူး၍ ကြည့်နေမိသည်။ အခြားကလေးများနှင့် လူကြီးများမှာ ထိုလက်ကြီးအား တွေ့မြင်ဟန် မရှိသော်လည်း ကိုရင်လေးက မြင်တွေ့ဟန် တူသည်။ မကြောက်မရွံ့ လက်ကြီးအား လက်ဖြင့် လှမ်းဆွဲပြီးပါးစပ်ဖြင့် ဖမ်းကိုက်လိုက်သည်။ နာကျင်သွားဟန်ဖြင့် လက်ကြီးက တွန့်ကနဲ့ ပြန်ရုတ်သွားသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်နှိုက်ပြန်သည်။ ကိုရင်လေးက သင်္ကန်းဖြင်းရိုက်တော့ လက်ကရုတ်သွားပြန်ကာ နောက်လက်တစ်ဖက်က ကိုရင်လေး၏ ကျောကုန်းအား ရိုက်ချ လိုက်ကာ လက်တစ်ဖက်က ဝက်သားတုံးများအား နှိုက်ယူ၍ ညောင်ပင်ကြီးပေါ် ယူသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ အရိုက်ခံ လိုက်ရသော ကိုရင်လေးမှာ မျက်လုံးကြီးများပြူးထွက်လာကာ ပါးစပ်တွင်းမှ အစာများ တခွီးခွီးပြန်ထွက်၍ မြေကြီးပေါ် လူးလှိမ့်နေတော့သည်။ လင်းထက်မှာလည်း ညောင်ပင်ကြီးပေါ် လက်ညိုးတထိုးထိုးနှင့် သရဲ ...သရဲ ဟု အော်ဟစ်သဖြင့် စားသောက်နေသော ကလေးများပါ ထိတ်လန့်ပြီး ထပြေးကုန်ကြသည်။ လူကြီး အချို့ပြေးလာကာ ..... ဘာဖြစ်တာလဲ...ဘာဖြစ်တာလဲ...ဘယ်မှာလဲ သရဲ... ဟု မျက်လုံးမျက်ဆန်ပြူးမေးကြသည်။ မျက်ဖြူများဆိုက်၍ ကော့လန်နေသော ကိုရင်လေးကို ကြည့်၍ လင်းထက်မှာ တကိုယ်လုံး တုန်ယင်လျက် ညောင်ပင်ပေါ်မှာ ထိုင်၍ ဝက်သားများကို အငမ်းမရ စားနေသော အမွှေးရှည်ရှည် မည်းမည်းနှင့် သရဲကြီးကို လက်ညိုးထိုးပြသည်။ သို့သော် မည်သူမျှ မြင်တွေ့ဟန်မရှိ။ ..... ဘာမှ မရှိပါဘူး... ကလေးတွေ... လန့်ကုန်ကြမယ်... ပါးစပ်က ပြောနေသော်လည်း စိတ်က ထိတ်လန့်သွားကြဟန်ဖြင့် လင်းထက်ကို ဝိုင်းဝန်းချီမ၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ် သယ်သွားကြရသည်။ ကျောင်းပ်ါရောက်မှ ပရိတ်တွေ ရွတ် ၊ ရေးမန်းတွေတိုက်၍ တော်တော် ကုလိုက်ရသည်။ ကိုရင်လေး၏ ကျောကုန်းပေါ်မှ လက်ဝါးရာကြီးကား တပတ်ခန့်ကြာသည့် အထိ မပျောက်...။ လူတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရေကန်ရှိ ညောင်ပင်ကြီးတွင် သရဲအရမ်းခြောက်သည်ဟုသော သတင်းလည်း တော်တော်ကြီးသွားသည်။ လင်းထက် အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာ အဖေဘက်က အဖွားဖြစ်သူ ပုလိပ်ရောဂါဖြင့် ဆေးရုံတင်ရသည်။ ဆေးရုံတင်ပြီး တစ်လ အကြာ အဖွားဖြစ်သူမှာ ချောင်းဆိုးရင်း ပါးစပ်ထဲမှ နှစ်လက်မခန့် သွေးတုံးတစ်တုံးနှင့် ပိုးလောက်လန်းကဲ့သို့သော နှီးဖျားခန့်အရွယ် အကောင်တစ်ကောင် ထွက်ကျလာခဲ့သည်။ ထိုအချင်းအရာကို တွေ့ပြီးဆရာဝန်က ခေါင်းခါသည်။ အနည်းဆုံးတပတ်၊ အများဆုံး တစ်လခန့်သာ ခံမည်ဟု ပြောသည်။ အဖွားကို ရွာကို ပြန်သယ်ရန် ဖေဖေ လှည်းနှင့်သွားကြိုတော့ လင်းထက်လည်း အတူ လိုက်သွား ခဲ့သည်။ ညအချိန်ပေမယ့် လရောင် ကြယ်ရောင် ရှိသဖြင့် မနက်၂နာရီ ခန့် ဆေးရုံ မှ အဖွားကို ပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြသည်။ လှည်းပေါ်မှာ အဖေက ရှေ့မှာ လှည်းမောင်း ၊ အဖွားက လှည်းအိမ်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး မှိန်းလျက် ၊ အဖွားဘေးမှာ လင်းထက်က ထိုင်ကာ ငိုက်မြည်းရင်း ပါလာခဲ့သည်။ အဖွားပါနေသဖြင့် ဖေဖေက လှည်းကို မခုန်အောင် ဖြည်းဖြည်းချင်း မောင်းနေရသောကြောင့် ခရီးက သိပ်မတွင်။ ထို့ကြောင့် ရွာအဝင် ဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး လင်းထက်အဖေပိုင် လယ်ကွက်ကို ဖြတ်ဖောက်ထားသော လှည်းလမ်းရောက်လာတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ မနက်၅နာရီ တုန်းမောင်းခေါက်သံ ကြားသည်။ တုန်းမောင်းသံကြောင့် လင်းထက် လန့်ပြီး မျက်လုံးပွင့်သွားသည်။ မလန့်ခံနိုင်ရိုးလား။ ဘုန်းကြီးကျောင်း တုန်းမောင်းခေါက်သည်နှင့် ကျောင်းမှာ မွေးထားသော ခွေးတစ်အုပ်က ကျယ်လောင်စွာ ဆွဲဆွဲငင်ငင် ထအူတော့သည်။ကျောင်းက ခွေးအူသည်နှင့် ရွာထဲက ခွေးများကလည်း သံပြိုင်လိုက်အူသည်မှာ တရွာလုံး ညံသွားတာက အမြဲလိုပင် ကြားနေကြ။ ဖေဖေ ပြောသည်ကတော့ ခွေးများလည်း သာဓုခေါ်တာတဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုခွေးအူသံကြားလျင် လင်းထက်ကတော့ ကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထသည်သာ။ ထို့ကြောင့် မငိုက်တော့ပဲ ဘေးပတ် ဝန်းကျင်ကိုသာ လိုက်လံကြည့်နေလိုက်သည်။ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်မစုံတော့ပေမယ့် သောကြာကြယ်နှင့် လ ကတော့ လင်းနေတုန်းမို့ အဝေး ပတ်ဝန်းကျင်ကို မှုန်ဝါးဝါး မြင်နေရသည်။ လင်းထက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်ကြည့်နေစဉ်မှာပင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ရေကန်ဘက်မှ အရိပ်တစ်ခု ပြေးလာနေသည်ကို မျက်ဝန်းထဲ မြင်လိုက်ရသည်။ ထိုအရိပ်က တမုဟုတ်ချင်းပင် လင်းထက်တို့ လှည်းအနားရောက်လာပြီး လှည်းနောက်မြှီးပေါ် ဝုန်းကနဲ ခုန်တက်လာရာ လှည်းအမြှီးပင် ညွှတ်ကျသွားသည်။ ဖေဖေက ရုတ်တရက် အံ့သြသွားပုံရကာ ..... ဘာဖြစ်တာလဲဟ... နောက်မြှီးထောင်သွားတယ်... ဟုပြောရင်း နောက်ကို လှည့်ကြည့်လာသည်။ ဘာမှ တွေ့ပုံမရပဲ ပြန်လှည့်ကာ လှည်းဆက်မောင်းနေသည်။ လှည်းမှာလည်း သိသိသာသာ လေးလံသွားပြီး နွားနှစ်ကောင်မှာ ခြေကန်ရုန်းနေရသည်။ .... ဟဲ့...နွားတွေ...ဘာဖြစ်နေတာလဲ... သွားစမ်း...တောက်... ဖြန်း...ဖြန်း... တလမ်းလုံး ရိုက်စရာ မလိုသော နွားများမှာ ဖေဖေ ကြိမ်နှင့်ရိုက်မှ သွားတော့သည်။ လင်းထက်ကတော့ လှည်း နောက်မြှီးမှာ ထိုင်နေသော အကောင်ကြီးကို စူးစိုက်ကြည့်နေမိသည်။ သဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရ။ မျက်လုံးနီနီကြီးများကို တော့ ကောင်းကောင်းမြင်နေသည်။ သရဲဆိုတာ ဖြစ်ရမည်ဟျုတွေးမိကာ ကြောက်လန့်နေသည်မှာ အသံပင် မထွက်။ သရဲကြီးက လင်းထက်ကို ကြည့်လိုက် အဖွားကို ကြည့်လိုက် လုပ်နေသည်။ ထိုနောက် သရဲကြီးက ရုတ်တရက်ထလာက ပက်လက်ကလေး မှိန်းနေသော အဖွားပေါ် ခွထိုင်လိုက်သည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ထို့နောက် အဖွား လည်ပင်းကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် စုံကိုင်ညှစ်နေသည်။ အဖွားမှာ မျက်လုံးများ ပြူးထွက်လာကာ လျှာကြီးထုတ်ပြသည်ကို လင်းထက်တွေ့လိုက်ရတော့ ..... အား.... သရဲကြီး...သရဲကြီး... အဖွား၏ ထိတ်လန့် ဖွယ်ရာ ပုံကို ကြည့်ပြီး လင်းထက် အာခေါင်ခြစ်အောင် အော်ကာ အဖေနား ထပြေးသည်။ ....ဟာ....ဒီ...ကောင်လေး...ငါကန်ချ လိုက်ရ...မဟုတ်သုက္ခတွေ မအော် စမ်းနဲ...ဘယ်မှာလဲ...သရဲ... အဖေက အော်ငေါက်ရင်း မေးတော့ လင်းထက် က အဖွားကို ထိုးပြလိုက်သည်။ .... လှည်းကို ထိန်းထား... ဘာမှ မရှိဘူး... အဖေ...အဖွားကို သွား.. ထိန်းထားမယ်... နွှားထိန်းကြိုးကို လင်းထက်လက်ကို ပေး၍ ဖေဖေက အဖွားနားမှာ သွားထိုင်သည်။ အဖွားပေါ်မှာ ထိုင်နေသော အကောင်ကြီးကို ဖေဖေ မြင်ပုံမရ။ လင်းထက်ကတော့ နောက်လှည့်မကြည့်တော့ပဲ နွားထိန်းကြိုးကိုသာ အာရုံထား၍ ထိန်းနေလိုက်သည်။ အဖိုးနှင့် အဖွားအိမ်ရောက်တော့ ပိန်လှီနေသောအဖွားကို လှည်းပေါ်မှ သယ်ချရာ ဖေဖေတစ်ယောက်တည်း မ မနိုင်သဖြင့် လူလေးယောက် ဝိုင်းသယ်ကာ အိမ်ပေါ် ပို့ခဲ့ရသည်။ ဘယ်နိုင်မတုန်း အဖွားပေါ်မှာ သရဲကြီးက မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်နေတာကိုး။ ထို သရဲကြီးကို ဘယ်သူမှ မမြင် လင်းထက်တစ်ယောက်သာ မြင်နေရသည်။ ထိုနေ့က စပြီး အဖွားနားကို လင်းထက် မကပ်။ တခြား မြေးမြစ်များကတော့ အဖွားခေါ်လျင် အနားသွားကြသည်။ ဆေးရုံတွင် ယဲ့ယဲ့လေးသာ ကျန်တော့သော အဖွား ဒေါ်တင်ရီမှာ အိမ်ပြန်ရောက်ကတည်းက အခြေအနေ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဆေးရုံက တပတ်၊ တစ်လသာ ခံမည်ဟု ပြောသော်လည်း အဘွားမှာ ပို၍ပင် ကျန်းမာလာသလိုပင်။ ထိုင်နိုင် ၊ ထနိုင် စကားပြောနိုင်လာသည်။ အစားအသောက်ကို သာမန်လူထက်ပင် စားနိုင်လာသည်။ အသားဟင်းများ စားရသည့်နေ့တွင် အဖွား မှာ ထူးခြားစွာ ထူထူထောင်ထောင် ဖြစ်နေတတ်သည်။ အသားဟင်းစားရလျင် အဖွားမျက်နှာမှာ လန်းဆန်းနေသည်ကို တွေ့ရတော့ အဖိုးနှင့် သားသမီးများက မရှိရှိသည့်ကြားက အသားဟင်း ရှာဖွေ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးသည်။ အဓိက အဖွားကြိုက်သော အသားဟင်းမှာ ဝက်သား၊ အမဲ သားဖြစ်သည်။ .... ကိုရွှေသန်း... ဒီနေ့ ရွာထဲက မြဒင်တို့အိမ်မှာ ဝက်ပေါ်မယ်တဲ့... ၂ပိဿာလောက် သွားဆွဲခဲ့လေ... ကျုပ်စားချင်လိုက်တာတော်.... ရွာထဲသွားလာနေသူတွေက ဘာသတင်းမှ မရသေး၊ အဖွားဒေါ်တင်ရီတစ်ယောက် ဘယ်က သတင်းရသည် မသိ။ .... သား....စိုးလွင်... ဟိုဘကချောင်းဝ ရွာမှာ...အမဲပေါ်မယ်လို့ကြားတယ်...့ အမေစားချင်တယ်ကွယ်.... အဖွား ဒေါ်တင်ရီ ဖေဖေ့ကို ပူဆာတာ ကြားလိုက်သည်။ ..... ဟာ... မေမေကလည်း...သားမနက်ကပဲ... အဲ့ဒီက ပြန်လာတာ... ဘာသံမှ မကြားခဲ့ပါဘူးဗျာ... ဖေဖေက ပြောတော့ အဖွားက ဒေါသ ထွက်ဟန်ဖြင့် ဖေဖေ့ကို ကြိမ်းမောင်းတော့သည်။ ..... ဒီမနက် ဟိုဘက်ရွာက ဖိုးသိုက်တို့ နွားကြီး ပိုးထိပြီး သေသွေားတယ်... အဲ့ဒါ လပေးနဲ့ ပေါ်ရောင်းမယ် လုပ်နေတာ... နင် မိဘကို မကျွေးမွေးချင်လို့ ရှောင်ဖယ် နေတာ မဟုတ်လား... မိဘ ကျေးဇူး မသိတဲ့ကောင်... သွား အခု အမဲသား သွား ဝယ်လာခဲ့... မဝယ်ပေးရင်...နင်နဲ့ငါ သိမယ်.... ဘယ်တုန်းကမှ ကြမ်းကြမ်းတမ်း မပြောတတ်သော အဖွား ပါးစပ်မှ ဒေါသတကြီး ကြိမ်းဝါးသံများ ထွက်လာသည်။ ဆံပင်ဖားလျားချလျက် မျက်းဝန်းများက နီနီရဲရဲနှင့် ဖေဖေ့ကို အံကြိတ်ကြည့်နေသည့် အဖွားပုံစံမှာ ကြောက်စရာ ကောင်းလှသည်။ ဖေဖေက ဘာမှ မပြောတော့ပဲ ချောင်းဝရွာကို သွားသည်။ တကယ်ပင် ဦးဖိုးသိုက်နွားကြီးမှာ မနက်က မြက်စားရင်း ပိုးထိ သေဆုံးသဖြင့် ပေါ်၍ ရောင်းသည်နှင့် ကြုံရလေသည်။ ဖေဖေက အံသြတကြီးနှင့်သာ အမဲသား တစ်တွဲ ဝယ်၍ ပြန်ဆွဲလာခဲ့ရလေသည်။ တရွာလုံး မည်သူမျှ မရသေးသော သတင်းကို အိမ်ပေါ်ထိုင်နေသည့် အဖွားက ဘယ်လို ကြားသည် မသိ။ အသားဟင်းမချက်သည့် နေ့များဆို အဖွားပါးစပ်မှာ လူနာဟုပင် ထင်စကာ မရှိ၊ တဗျစ်တောက်တောက် ပြောဆိုနေတတ်သည်။ .... ဟဲ့... မယ်အုန်း... နင့်အိမ်မှာ ငါးဟင်း ချက်တယ် မဟုတ်လား... ငါ...စားချင်တာအေ... တခွက်လောက် လာပို့ပါလား... .... ဟုတ်...ဟုတ်... အစ်မတင်ရီ... ကျမ... လာပို့ပေးမယ်.... အိမ်ရှေ့က ဖြတ်သွားသူ မချန် ဟင်း ပို့ခိုင်းတတ်သည်။ ဘယ်သူ့အိမ် ဘာဟင်းချက်တာ အဖွားက ထိုင်ရာ မထ သိနေတတ်သည်။ ဒါတွေက လူကြီးတွေ ပြန်ပြော နေကြသည်ကို ကြား၍ လင်းထက်သိရခြင်းသာ။ အဖွား ဆေးရုံက ပြန်လာကတည်းက အဖွားတို့ အိမ်ပေါ် လင်းထက် လုံးဝ မတက်တော့။ မိဘတွေနှင့် လိုက်သွား တိုင်း အိမ်အောက် မှာသာ ရွယ်တူ ဝမ်းကွဲ ညီကို မောင်နှစ်မ များနှင့် သာ ဆော့ကစားနေတတ်သည်။ တစ်ရက်တော့ .... သားလေး... ပူတူး....သားအဖွား ခေါ်နေတယ်... သား နဲ့ မတွေ့တာ ကြာလို့ တွေ့ချင်လို့တဲ့... အဖွား နား သွားလိုက်ပါဦး... ဖေဖေနှင့် မေမေက လင်းထက်ကို ခေါ်ကာ ပြောလာသည်။ .... မသွားဘူး...မသွားဘူး... လင်းထက် အကြောက်အကန် ငြင်းသည်။ .... သွားလေ... ပူတူးလေး... ကိုယ့်အဖွား ဆီကို... သားအစ်ကိုတွေ... ညီတွေ... ညီမတွေတောင် အဖွားနား...ကပ်နေတာပဲဟာ... ကြီးကြီး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ ဦးလေး တော်စပ်သည့် ဆွေမျိုးများကပါ ဝိုင်းပြောသော်လည်း လင်းထက်က မသွား။ ပေကပ်နေသည်။ အတင်းဆွဲခေါ်ကြတော့ အာခေါင်ခြစ်အောင် အော်ငိုသည်။ .... ကိုယ့်အဖွားနား...ဘာလို့ မသွားတာလဲ... အဖွား စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေမယ်လေ... သားလေး... အဖွား စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင် သားလေး ငရဲကြီးလိမ့်မယ်... မိဘတွေက တိုးတိုးတိတ်တ်ိတ် ဆုံးမသည်။ .... အဲ့ဒါ သားအဖွား မဟုတ်ဘူး...သရဲကြီး... ကြောက်စရာကြီး... သား...ကြောက်တယ်.... လင်းထက် စကားကြောင့် အားလုံး မျက်စိ မျက်နှာတွေ ပျက်ကုန်ကြသည်။ .... ပူတူးလေး...ဘာဒေပြောနေတာလဲ... မပြောကောင်းတာတွေ မပြောရဘူးလေ... မဟုတ်တာ ပြောရင်... အဖိုးရိုက်မှာ... ....ဟုတ်ပါတယ် ဆိုမှ ... ဟိုမှာ မတွေ့ကြဘူးလား... အဖွားပေါ်မှာ ခွထိုင်ပြီး... အဖွားလည်ပင်းကို ညှစ်ထားတဲ့ သရဲကြီး... အမွှေးကြီးတွေကို အရှည်ကြီးပဲ... သားကို လက်ယက်ပြီး ခေါ်နေတာ... ခဏ... ခဏပဲ... သား..ကြောက်လို့... အိမ်ပေါ်တောင် မတက်ဘူး... လင်းထက်က အိမ်ပေါ်မှ အဖွားရှိရာ လက်ညိုးထိုးကာ ငိုသံပါကြီးနှင့် ပြောလိုက်တော့ အားလုံး ထိတ်လန့် ကုန်ကြသည်။ အဖိုးက ဖေဖေ့ကို တိုးတိုး တိတ်တိတ် လှမ်းခေါ်သည်။ .... စိုးလွင်... မင်း...တော်ကဆော့ ရွာက ဆရာကြီး ဦးထိန်ကို သွားပင့်ကွာ... ငါ့မြေး ပြောပုံနဲ့ မတင်ရီပုံစံကို ငါ မသင်္ကာဘူး... စစ်ကြည့်ရအောင်... ညနေမှာ ဖေဖေနှင့်အတူ ခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍ လွယ်အိတ်တစ်လုံး လွယ်ထားသော လူကြီး တစ်ဦးရောက်လာသည်။အဖိုးနှင့် သက်တူ ရွယ်တူ ခန့်ရှိသော်လည်း အဖိုးက ဆရာကြီးဟူ၍ ခေါ်သည်။ ဆရာကြီး အိမ်ပေါ်တောင် မတက်ရသေး အိပ်ယာထဲ မှ အဖွားက ရုတ်တရက် ထ,ထိုင်ကာ ဆရာကြီး ဦးထိန်ကို လက်ညိုး ငေါက်ငေါက်ထိုး၍ .... နင် ငါ့အိမ်...ဘာလာ လုပ်တာလဲ... မလာနဲ့ သွား... ငါ့ ကို လာ မစမ်းကြနဲ့နော်...ဟင်း...ဟင်း... ဟု ထအော်ကာ ဒေါသတကြီး မောင်းထုတ်တော့သည်။ အဖွား ဒေါသ ကြီးလျင် ကြောက်စရာ ကောင်းလှသည်။ မျက်လုံးများမှာ နီရဲလာက လူသတ်တော့မည့်ဟန်...။ အဖိုးက ဆရာကြီးဖိုးထိန်အား ခြေရင်းဘက်မှ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်ကြီး သန်းဝင်း အိမ်ခေါ်သွားသည်။ ညရောက်တော့ ဒေါ်ကြီးသန်းဝင်း အိမ်မှာ လူစည်သွားသည်။ လင်းထက်တို့ ကလေး တစ်သိုက်လည်း ဘာလဲဟူသော သိချင်ဇောဖြင့် စပ်စုကြသည်။ ဆရာကြီးဦးထိန်ဆိုသူက ဘုရားစင် ၊ တွင် ဆီးမီးများထွန်း အာရုံပြု ရှစ်ခိုးကန်တော့ပြီး သူ့ရှေ့တွင် လက်ဖြင့် ကြမ်းပြင်ကို ထောက်၍ စည်းဝိုင်း ပုံသဏ္ဍန် ဝိုင်းလိုက်သည်။ ထိုစည်းဝိုင်း အတွင်း ဒေါ်ကြီး သန်းဝင်းအား ထိုင်စေပြီး ပါးစပ်မှ မန်းမှုတ်နေသည်။ ခဏနေတော့ ဒေါ်ကြီး သန်းဝင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး တစုံတရာ ပူးကပ်လာလေတော့သည်။ ဆံပင်များကို ဖားလျားချကာ မျက်လုံးများက ဒေါသ ချောင်းချောင်းထွက်ဟန်ဖြင့် အားလုံးကို ဝေ့ကြည့် သည်။ .... ငါ့ကို...ဘာလို့...နှောက်ယှက်ကြတာလဲ...ဟင်း...ဟင်း...သေချင်ကြလို့လား... ဒေါ်ကြီး သန်းဝင်း ပါးစပ်မှ အသံသြသြကြီး ထွက်လာသည်။ .... မင်း...ဘယ်သူလဲ...ဘယ်ကလဲ... ဆရာကြီးက မေးတော့ ပထမ မဖြေ။ ဆရာကြီးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများကို ရန်ပြု ချင်ဟန် ထခုန်ပေါက် သောင်းကျန်းတော့သည်။ ဆရာကြီးက ဂါထာတွေရွတ်၊ မန်းကြိုးတွေ လည်ပင်းချည်တော့မှ အနည်းငယ် ငြိမ်သွားသည်။ .... ငါက... ဘုန်းကြီးကျောင်း ရေကန်ညောင်ပင်က... သရဲ... အစားစားချင်လို့ ကပ်ပြီး နေ နေတာ... ဆရာကြီး ၏ မန်းကြိုး ဂါထာများက အတော်စွမ်းဟန်တူသည်။မေးသမျှ ကို ဖြေသည်။ သူသည် ရှေးယခင် မြိုင်သာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဘုန်းကြီးတစ် ပါးဖြစ်ကာ ပျံလွန်တော်မူတော့ အယူလွဲကာ ညောင်ပင်ကြီးတွင် သရဲဖြစ်နေသူ တဲ့။ဘွဲ့နာမည်တွေတော့ မပြော။ ဖေဖေ့ကို လေဖြတ်အောင် လုပ်တာလဲသူ၊ ကိုရင်လေးဆီက အစားလုစားတာလည်းသူ၊ အဖွားခန္ဓာကိုယ်မှာ ကပ်ပြီးနေတာလဲ သူ၊ သူ့ကို လင်းထက် ဘာ့ကြောင့်မြင်ရတာလည်း ဟု ဆရာကြီးက မေးတော့.... လင်းထက်သည် အရင်ဘဝက သူနေထိုင်ရာ ညောင်ပင်နှင့် ကပ်ရပ် ညောင်ပင်မှ သရဲ တစ်ကောင်ဖြစ်ကာ ရင်းနှီးကြသည်ဟု ဆိုသည်။လင်းထက် သရဲဘဝဖြင့် ညောင်ပင်ကြီးတွင် နေထိုင်ရင်း မြိုင်သာ ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ မရပ်ကုန်း ဆရာတော် ကြွလာစဉ် ကြည်ညိုလှသည် ဆိုပြီး အပင်မှ ဆင်းကန်တော့၊ မရပ်ကုန်း ဆရာတော် ဟောသော တရားများကို သွားနာယူရင်း ကျွတ်တန်းဝင်ကာ ဘုန်းကြီးကျောင်း အနီးလယ်ကွက်ထဲ နေထိုင်သည့် လင်းထက် အမေထံ ဝင်စားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် သရဲ ဘဝက ရင်းနှီးသူမို့ ကိုယ်ထင်ပြ၍ လင်းထက်ကို နှုတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ထို မရပ်ကုန်းဆရာတော်မှာ မည်သူမျှ မသိသော ရဟန္တာတစ်ပါး ဖြစ်သည်ဟု လည်း ပြောသည်။ ..... ဦးရွှေသန်း....ရော့...ဒီ... မန်းကြိုးကို လူနာ လည်ပင်းမှာ သွားဆွဲထားပေး...ဒီရေမန်းကိုလဲ... ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ဖျန်းပေးခဲ့....ဒါမှ..ဒီသရဲကောင်...လူနာကို ပြန်ဝင်ကပ်လို့ မရမှာ... ဆရာကြီးက ရေမန်းတွေ မန်းကြိုးတွေ အဖိုးအားပေးလိုက်တော့ ဝင်ပူးနေသော သရဲ ချုံးပွဲချ ငိုတော့သည်။ သူ ဝင်ပူး ခိုကပ် စားသောက်ဖို့ ခန္ဓာ မရှိတော့ သည်မဟုတ်လား။ ..... မင်း...နေရာမှာ...မင်း...အေးအေးဆေးဆေး ပြန်နေ... သူတပါးကို မနှောင့်ယှက်နဲ့... အလှူအတန်းတွေရှိလို့ အမျှ အတန်းဝေရင်.. သာဓုခေါ်ပြီး... ဒီမကောင်းတဲ့ ဘဝက ကျွတ်အောင်လုပ်.... ဆရာကြီးက အမိန့်ပေး၍ ပူးကပ်ရာမှ ပြန်ထုတ်သည်။ သရဲ က မထွက်ခင် လင်းထက် ဖခင်ကို သတိပေး ပြောသွားသေးသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း အနီး လယ်ကွက်အား စပါးစိုက်ဖို့ အသုံးမပြုရန်။ ညနေစောင်းလျင် မြိုင်သာဘုန်းကြီးကျောင်း စေတီ ၏ အရိပ်မှာ ထိုလယ်ကွက်အတွင်း အရိပ်ကျ သဖြင့် လယ်လုပ်ရန် မသင့်တော်။ဘုရားမြေ အဖြစ် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လှူဒါန်းရန် ၊ သူ သတိပေးခဲ့သော်လည်း ဂရု မစိုက်သဖြင့် ဖေဖေ့ကို ဒုက္ခပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကာ ဝင်ပူးရာ မှ ထွက်သွားခဲ့သည်။ ထိုညတွင်ပင် အဖွားမှာ ဆုံးပါး သွားခဲ့ပါသည်။ အဖွားဆုံးသည်နှင့် မခံမရပ်နိုင်အောင် အပုပ်နံ့များ ထွက်လာသည်။ အစက ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး ရှိလာသော အဖွားမှာ ချက်ချင်းပင် အသားတစ်စက်မှ မရှိတော့သကဲ့သို့ အရိုးပေါ်မှာ အရေပြားလေး တင်ရုံသာ ရှိသည်။ .... လူနာက ဆုံးတာ ကြာနေပြီ... သူရဲ့ ရုပ်မှာ..သရဲက ဝပ်ကပ်မှီခိုပြီး စားသောက်နေလို့ မသေသေးသလို ဖြစ်ပြီး နလံထူနေတာ...ပြောရရင် ဖုတ်ဝင်တာပေါ့ကွာ... ...... မောင်စိုးလွင်... မင်းတို့ကလေးကိုလည်း... ဂရုစိုက်... ကံနိမ့်လို့...တစ္ဆေသရဲကို မြင်ရတာ... ရှင်ပြုပေးလိုက်တာ ကောင်းမယ်..... ဟု ဆရာကြီး ဦးထိန်က ပြောသွားသည်။ အဖွား ဆွမ်းသွတ်တွေ ဘာတွေ ပြီးလို့ မကြာခင် လင်းထက် ကိုရင် ဝတ်ခဲ့ပါသည်။ ဖေဖေကလည်း စေတီ အရိပ်ကျသော လယ်ကို ဘုရားမြေအဖြစ် အဖွားကို ရည်စူး၍ မြိုင်သာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လှူဒါန်းလိုက်သည်။ မြိုင်သာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကိုရင် ဝိစာရ အမည်ဖြင့် ကိုရင် ဝတ်ခဲ့သော လင်းထက်မှာ ဉာဏ်ကောင်းလှသဖြင့် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က ချစ်သည်။ ဆရာတော် အံခိုင်းသော တရားစာ များကို ကိုရင် ဝိစာရက သူများနှင့် မတူ အချိန်တို အတွင်း ပြန်အံ နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာတော်က ဦးစားပေးသည်။ ကိုရင် ဝိသာရ တရားစာ ကျက်လျင် ရေကန်ကြီးရှိ ညောင်ပင်အောင်တွင် ထိုင်ကာ စေတီတော်ကြီးကို ကြည့် ၍ ကျက်သည်။ ထို့ကြောင့်လားတော့ မသိ။ စာရမြန်သည်။ တစ်ညတော့ ကိုရင် ဝိစာရ အိပ်မက် မက်သည်။ .... မင်း ကို ကိုယ်ထင်မပြနဲ့ဆိုလည်း... မပြပါဘူးကွာ... ငါ့ညောင်ပင်အောက်တော့ တရားစာလာ မကျက်ပါနဲ့... ငါ နေလို့ မရဘူးကွ... ထွက်..ထွက်..ပြေးနေရတယ်... ဟု ညောင်ပင်ပေါ်မှ လှမ်းပြောနေသော အမွှေးရှည်ရှည် နှင့် သရဲကို မြင်မက်သည်။ ထို့နောက်တော့ ကိုရင် ဝိစာရ ညောင်ပင်အောက်မှာ စာသွားမကျက်တော့ပဲ စေတီ အုတ်မြစ်ပေါ်မှာသာ ထိုက်၍ တရားစာ အံတော့လေသည်။ တစ်လခန့်ကြာတော့ လင်းထက် ကိုရင် ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ လင်းထက်မှာ ညောင်ပင်မှ သရဲကြီး၏ အရိပ်အယောင်ကို မမြင်ရတော့သလို ညောင်ပင်ကြီးမှာ သရဲခြောက်သည်ဟုသော သတင်းလဲ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်ကာ ပုံပြင်လောက်သာ ကျန်တော့လေသည်။ ထိုမျှသာ..... ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ပြီးပါပြီ။
အမှားအယွင်း ၊ လိုအပ်ချက်များကို သည့်ခံဖတ်ပေးပါရန် ။
Credit: ချစ်သား မာရ်နတ်(Y,A,P)
၅ နှဈသားက မမေကေ ညီလေး ကိုယျဝနျကွီးနှငျ့ ကွမျးပဉျြပျေါမှာ ပကျလကျလှနျ၍ အိပျနစေဉျ...။ ဖဖေကေ အိမျ ရှေ့ မွကွေီးပျေါမှာ ဓားမတဈလကျနှငျ့ ထငျးတှေ ခှဲနသေညျ။လငျးထကျက မမေေ့ ဘေးမှာ ဗိုကျထဲမှ ညီလေး၏ လှုပျရှားမှုအား လကျဖွငျ့ လိုကျစမျး၍ ကစားရငျး ဖဖေေ ထငျးခှဲနသေညျကို အမှုမဲ့ကွညျ့နေ မိခြိနျ။ ထိုစဉျ လငျးထကျ၏ မကျြဝနျးထဲ နခေ့ငျးကွောငျတောငျကွီး ပတျဝနျးကငျြမှာ မှောငျမဲ သှားသလို ခံစားလိုကျရသညျ။ မှောငျမဲသှားသညျ ဆိုသညျမှာ အိမျပျေါနှငျ့ အိမျရှေ့ ကုနျးမွကေို မှုနျဝါးဝါး တှနေ့ရေသညျ။ အခွားပတျဝနျးကငျြမှာတော့ ကလကာ မညျးကွီး ကာထား သလို မညျးမှောငျကနြခွေငျးဖွဈသညျ။ ထိုစဉျ ဘုနျးကွီးကြောငျးဘကျမှ လာသော တာကနျသငျးပျေါ အမှောငျထဲမှနေ၍ မညျးမညျး အရိပျတဈခု တဖွညျးဖွညျးထှကျလာသညျကို လငျးထကျတှလေို့ကျသညျ။ ထို မဲမဲသဏ်ဍနျကွီးက ထငျးခှဲနသေော ဖဖေနှေငျ့ မလှမျးမကမျးတှငျ မတျတပျရပျ၍ လငျးထကျတို့ အိမျပျေါကို လှမျးကွညျ့နသေညျ။ လငျးထကျက မမေကေို့ မသိမသာ လှုပျနှိုးသျောလညျး အိပျဆေးမိထားသူတဈယောကျလို မမေကေ လုံးဝ နိုးမလာ။ အရိပျမဲကွီးက အတနျကွာရပျကွညျ့နပွေီး ထငျးခှဲနသေော ဖဖေဆေီ့ကို အန်တရာယျ ပွုမညျ့ပုံဖွငျ့ လှမျးသှားနသေညျ။ ဖဖေကေတော့ ဘာမှသိပုံမရ။ကြောပေးလကျြ ထငျးတှကေိုသာ အားစိုကျခှဲနသေညျ။ ....ဖဖေေ နောကျမှာ အကောငျကွီး.... လငျးထကျ အျောဟဈပွီး ဖဖေကေို့ သတိပေးဖို့ ကွိုးစားသညျ။ သို့သျော လညျခြောငျးမှ ထှကျလာသညျ့ အသံက... .... အ....အ...အဈ....ဟူ၍ သာထှကျလာသညျ။ အရိပျမဲကွီးမှာ ဖဖေနေ့ောကျကြောကို ရောကျသှားကာ လကျနှဈဖကျက ဖဖေေ့ လညျပငျးကို လှမျးသှားပွီး ဖမျးညှဈနသေညျ။ မကျြလုံးပွူး၍ ငွိမျသှားသော ဖဖေကေို့ ကွညျ့၍ လငျးထကျ မကျြလုံးစုံမှိတျခကြာ ရှိသမြှအားကို သုံး၍ အာခေါငျခွဈ၍ အျောခလြိုကျသညျ။ .... အားးးးးးးးးးးးးးးးးးး.... .... သား... သား... ဘာဖွဈတာလဲ.... မမေေ့ အသံကို ကွားလိုကျရတော့မှ မကျြလုံးအစုံကို ပွနျဖှငျ့လိုကျသညျ။ပတျဝနျးကငျြတဈခုလုံးက မူလအတိုငျး နအေလငျးရောငျဖွငျ့ လငျးခငျြးနသေညျ။မမေ့ေ့ မကျြနှာက စိုးရိမျပူပနျမှု အပွညျ့နှငျ့ လငျးထကျကို ကွညျ့နသေညျ။ ...အိမျ...အိမျ...ရှမှေ့ာ မညျးမညျးကွီး.... ဖဖေ့ကေို့ သတျနတော ...သားတှတေ့ယျ.... ......အျော..ဘာမှ မရှိပါဘူး... သားရယျ... နခေ့ငျးကွောငျကွီး.....အလနျ့.... မမေ့ေ့ စကား တဈဝကျတပကျြနှငျ့ ရပျသှားသညျ။ အိမျရှမွေ့ကွေီးပျေါမှာ ခှခှေလေေး လဲနသေညျ့ ဖဖေေ့ ကို တှလေို့ကျရသညျ မဟုတျပါလား... မမေကေော လငျးထကျပါ အိမျပျေါက ပွေးဆငျးပွီး ကွညျ့တော့ ဖဖေမှေ့ာ ခေါငျးတခွမျးစောငျး၍ လဲကနြသေညျ။ .... ကိုစိုးလှငျ.... ကိုစိုးလှငျ...ဘာဖွဈတာလဲ... ဖဖေကေို့ ကမနျးကတနျး ကောကျထူ၍ မမေေ မေးလိုကျသျောလညျး ဖဖေေ မဖွနေိုငျပါ။ ဖဖေေ့ ခန်ဓာကိုယျတဈခွမျး လဖေနျြးသှားကာ ပါးစပျရှဲ့နေ သောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ တောဆေးဆရာကောငျးနှငျ့ တှေ့၍သာ တဈလအတှငျး ဖဖေေ ပွနျ၍ ကနျြးမာရေးကောငျးသှားခွငျးဖွဈသညျ။ကနျြးမာရေးကောငျးတော့ ဖဖေေ ပွောပွသညျက ... ဘာဖွဈသှားမှနျး မသိဘူး...တဈယောကျယောကျက လညျပငျး ဖမျးညှဈသလို ခံလိုကျရပွီး လဲကသြှားတာ ပဲ သိတယျ... မမေကေ လငျးထကျမကျြနှာကို တအံ့တသွ လှမျးကွညျ့တာ အမှတျရသေးသညျ။ ရှာဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျ ကထိနျအလှူပှဲ ကငျြးပစဉျက တဈခါ။ အလှူပှဲတှငျ လူကွီးသူမမြားအား ဘုနျးကွီးကြောငျးအတှငျး ဆှမျးကြှေးဓမ်မာရုံတှငျ ထမငျးကြှေး၍ ကလေးငယျမြားအား ဘုနျးကွီးကြောငျး အရှဘေ့ကျ ကနျဘောငျကွီးရှိ ညောငျပငျကွီးမြားအောကျ အရိပျရသော မွကှေကျလပျတှငျ မွစေိုကျခုံတနျးမြား ပွုလုပျ၍ ထမငျး ကြှေးမှေးသညျ။ လငျးထကျတို့ ကလေးတဈသိုကျ အားရပါးရ စားနကွေစဉျ လငျးထကျရှေ့ မကျြနှားခငျြးဆိုငျ စားနသေော ကိုရငျလေး၏ ထမငျးပနျကနျထဲ လကျမညျးကွီး တဈဖကျ လာနှိုကျသညျကို လငျးထကျ တှလေို့ကျရသညျ။ လကျကွီးမှာ အမှေးရှညျကွီးမြားနှငျ့ဖွဈကာ ကိုရငျလေး ပနျးကနျထဲမှ ဝကျသားတုံးမြားကို လှမျးနှိုကျနခွေငျးဖွဈသညျ။ လငျးထကျမှာ ထိတျလနျ့လှနျး သဖွငျ့ ထိုလကျကွီးမြားအား မကျြလုံးပွူး၍ ကွညျ့နမေိသညျ။ အခွားကလေးမြားနှငျ့ လူကွီးမြားမှာ ထိုလကျကွီးအား တှမွေ့ငျဟနျ မရှိသျောလညျး ကိုရငျလေးက မွငျတှဟေ့နျ တူသညျ။ မကွောကျမရှံ့ လကျကွီးအား လကျဖွငျ့ လှမျးဆှဲပွီးပါးစပျဖွငျ့ ဖမျးကိုကျလိုကျသညျ။ နာကငျြသှားဟနျဖွငျ့ လကျကွီးက တှနျ့ကနဲ့ ပွနျရုတျသှားသညျ။ နောကျတဈကွိမျထပျနှိုကျပွနျသညျ။ ကိုရငျလေးက သင်ျကနျးဖွငျးရိုကျတော့ လကျကရုတျသှားပွနျကာ နောကျလကျတဈဖကျက ကိုရငျလေး၏ ကြောကုနျးအား ရိုကျခြ လိုကျကာ လကျတဈဖကျက ဝကျသားတုံးမြားအား နှိုကျယူ၍ ညောငျပငျကွီးပျေါ ယူသှားသညျကိုတှလေို့ကျရသညျ။ အရိုကျခံ လိုကျရသော ကိုရငျလေးမှာ မကျြလုံးကွီးမြားပွူးထှကျလာကာ ပါးစပျတှငျးမှ အစာမြား တခှီးခှီးပွနျထှကျ၍ မွကွေီးပျေါ လူးလှိမျ့နတေော့သညျ။ လငျးထကျမှာလညျး ညောငျပငျကွီးပျေါ လကျညိုးတထိုးထိုးနှငျ့ သရဲ ...သရဲ ဟု အျောဟဈသဖွငျ့ စားသောကျနသေော ကလေးမြားပါ ထိတျလနျ့ပွီး ထပွေးကုနျကွသညျ။ လူကွီး အခြို့ပွေးလာကာ ..... ဘာဖွဈတာလဲ...ဘာဖွဈတာလဲ...ဘယျမှာလဲ သရဲ... ဟု မကျြလုံးမကျြဆနျပွူးမေးကွသညျ။ မကျြဖွူမြားဆိုကျ၍ ကော့လနျနသေော ကိုရငျလေးကို ကွညျ့၍ လငျးထကျမှာ တကိုယျလုံး တုနျယငျလကျြ ညောငျပငျပျေါမှာ ထိုငျ၍ ဝကျသားမြားကို အငမျးမရ စားနသေော အမှေးရှညျရှညျ မညျးမညျးနှငျ့ သရဲကွီးကို လကျညိုးထိုးပွသညျ။ သို့သျော မညျသူမြှ မွငျတှဟေ့နျမရှိ။ ..... ဘာမှ မရှိပါဘူး... ကလေးတှေ... လနျ့ကုနျကွမယျ... ပါးစပျက ပွောနသေျောလညျး စိတျက ထိတျလနျ့သှားကွဟနျဖွငျ့ လငျးထကျကို ဝိုငျးဝနျးခြီမ၍ ဘုနျးကွီးကြောငျးပျေါ သယျသှားကွရသညျ။ ကြောငျးပျါရောကျမှ ပရိတျတှေ ရှတျ ၊ ရေးမနျးတှတေိုကျ၍ တျောတျော ကုလိုကျရသညျ။ ကိုရငျလေး၏ ကြောကုနျးပျေါမှ လကျဝါးရာကွီးကား တပတျခနျ့ကွာသညျ့ အထိ မပြောကျ...။ လူတှေ ပါးစပျဖြားမှာ ဘုနျးကွီးကြောငျး ရကေနျရှိ ညောငျပငျကွီးတှငျ သရဲအရမျးခွောကျသညျဟုသော သတငျးလညျး တျောတျောကွီးသှားသညျ။ လငျးထကျ အသကျ ၁၂ နှဈအရှယျမှာ အဖဘေကျက အဖှားဖွဈသူ ပုလိပျရောဂါဖွငျ့ ဆေးရုံတငျရသညျ။ ဆေးရုံတငျပွီး တဈလ အကွာ အဖှားဖွဈသူမှာ ခြောငျးဆိုးရငျး ပါးစပျထဲမှ နှဈလကျမခနျ့ သှေးတုံးတဈတုံးနှငျ့ ပိုးလောကျလနျးကဲ့သို့သော နှီးဖြားခနျ့အရှယျ အကောငျတဈကောငျ ထှကျကလြာခဲ့သညျ။ ထိုအခငျြးအရာကို တှပွေီ့းဆရာဝနျက ခေါငျးခါသညျ။ အနညျးဆုံးတပတျ၊ အမြားဆုံး တဈလခနျ့သာ ခံမညျဟု ပွောသညျ။ အဖှားကို ရှာကို ပွနျသယျရနျ ဖဖေေ လှညျးနှငျ့သှားကွိုတော့ လငျးထကျလညျး အတူ လိုကျသှား ခဲ့သညျ။ ညအခြိနျပမေယျ့ လရောငျ ကွယျရောငျ ရှိသဖွငျ့ မနကျ၂နာရီ ခနျ့ ဆေးရုံ မှ အဖှားကို ပွနျချေါလာခဲ့ကွသညျ။ လှညျးပျေါမှာ အဖကေ ရှမှေ့ာ လှညျးမောငျး ၊ အဖှားက လှညျးအိမျပျေါမှာ ပကျလကျကလေး မှိနျးလကျြ ၊ အဖှားဘေးမှာ လငျးထကျက ထိုငျကာ ငိုကျမွညျးရငျး ပါလာခဲ့သညျ။ အဖှားပါနသေဖွငျ့ ဖဖေကေ လှညျးကို မခုနျအောငျ ဖွညျးဖွညျးခငျြး မောငျးနရေသောကွောငျ့ ခရီးက သိပျမတှငျ။ ထို့ကွောငျ့ ရှာအဝငျ ဘုနျးကွီးကြောငျးအနီး လငျးထကျအဖပေိုငျ လယျကှကျကို ဖွတျဖောကျထားသော လှညျးလမျးရောကျလာတော့ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှ မနကျ၅နာရီ တုနျးမောငျးခေါကျသံ ကွားသညျ။ တုနျးမောငျးသံကွောငျ့ လငျးထကျ လနျ့ပွီး မကျြလုံးပှငျ့သှားသညျ။ မလနျ့ခံနိုငျရိုးလား။ ဘုနျးကွီးကြောငျး တုနျးမောငျးခေါကျသညျနှငျ့ ကြောငျးမှာ မှေးထားသော ခှေးတဈအုပျက ကယျြလောငျစှာ ဆှဲဆှဲငငျငငျ ထအူတော့သညျ။ကြောငျးက ခှေးအူသညျနှငျ့ ရှာထဲက ခှေးမြားကလညျး သံပွိုငျလိုကျအူသညျမှာ တရှာလုံး ညံသှားတာက အမွဲလိုပငျ ကွားနကွေ။ ဖဖေေ ပွောသညျကတော့ ခှေးမြားလညျး သာဓုချေါတာတဲ့။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ထိုခှေးအူသံကွားလငျြ လငျးထကျကတော့ ကွကျသီးဖနျြးဖနျြးထသညျသာ။ ထို့ကွောငျ့ မငိုကျတော့ပဲ ဘေးပတျ ဝနျးကငျြကိုသာ လိုကျလံကွညျ့နလေိုကျသညျ။ ကောငျးကငျမှာ ကွယျမစုံတော့ပမေယျ့ သောကွာကွယျနှငျ့ လ ကတော့ လငျးနတေုနျးမို့ အဝေး ပတျဝနျးကငျြကို မှုနျဝါးဝါး မွငျနရေသညျ။ လငျးထကျ ပတျဝနျးကငျြကို လိုကျကွညျ့နစေဉျမှာပငျ ဘုနျးကွီးကြောငျး ရကေနျဘကျမှ အရိပျတဈခု ပွေးလာနသေညျကို မကျြဝနျးထဲ မွငျလိုကျရသညျ။ ထိုအရိပျက တမုဟုတျခငျြးပငျ လငျးထကျတို့ လှညျးအနားရောကျလာပွီး လှညျးနောကျမွှီးပျေါ ဝုနျးကနဲ ခုနျတကျလာရာ လှညျးအမွှီးပငျ ညှတျကသြှားသညျ။ ဖဖေကေ ရုတျတရကျ အံ့သွသှားပုံရကာ ..... ဘာဖွဈတာလဲဟ... နောကျမွှီးထောငျသှားတယျ... ဟုပွောရငျး နောကျကို လှညျ့ကွညျ့လာသညျ။ ဘာမှ တှပေုံ့မရပဲ ပွနျလှညျ့ကာ လှညျးဆကျမောငျးနသေညျ။ လှညျးမှာလညျး သိသိသာသာ လေးလံသှားပွီး နှားနှဈကောငျမှာ ခွကေနျရုနျးနရေသညျ။ .... ဟဲ့...နှားတှေ...ဘာဖွဈနတောလဲ... သှားစမျး...တောကျ... ဖွနျး...ဖွနျး... တလမျးလုံး ရိုကျစရာ မလိုသော နှားမြားမှာ ဖဖေေ ကွိမျနှငျ့ရိုကျမှ သှားတော့သညျ။ လငျးထကျကတော့ လှညျး နောကျမွှီးမှာ ထိုငျနသေော အကောငျကွီးကို စူးစိုကျကွညျ့နမေိသညျ။ သဲသဲကှဲကှဲမမွငျရ။ မကျြလုံးနီနီကွီးမြားကို တော့ ကောငျးကောငျးမွငျနသေညျ။ သရဲဆိုတာ ဖွဈရမညျဟု တြှေးမိကာ ကွောကျလနျ့နသေညျမှာ အသံပငျ မထှကျ။ သရဲကွီးက လငျးထကျကို ကွညျ့လိုကျ အဖှားကို ကွညျ့လိုကျ လုပျနသေညျ။ ထိုနောကျ သရဲကွီးက ရုတျတရကျထလာက ပကျလကျကလေး မှိနျးနသေော အဖှားပျေါ ခှထိုငျလိုကျသညျကို တှလေို့ကျရသညျ။ ထို့နောကျ အဖှား လညျပငျးကို လကျနှဈဖကျနှငျ့ စုံကိုငျညှဈနသေညျ။ အဖှားမှာ မကျြလုံးမြား ပွူးထှကျလာကာ လြှာကွီးထုတျပွသညျကို လငျးထကျတှလေို့ကျရတော့ ..... အား.... သရဲကွီး...သရဲကွီး... အဖှား၏ ထိတျလနျ့ ဖှယျရာ ပုံကို ကွညျ့ပွီး လငျးထကျ အာခေါငျခွဈအောငျ အျောကာ အဖနေား ထပွေးသညျ။ ....ဟာ....ဒီ...ကောငျလေး...ငါကနျခြ လိုကျရ...မဟုတျသုက်ခတှေ မအျော စမျးနဲ...ဘယျမှာလဲ...သရဲ... အဖကေ အျောငေါကျရငျး မေးတော့ လငျးထကျ က အဖှားကို ထိုးပွလိုကျသညျ။ .... လှညျးကို ထိနျးထား... ဘာမှ မရှိဘူး... အဖေ...အဖှားကို သှား.. ထိနျးထားမယျ... နှားထိနျးကွိုးကို လငျးထကျလကျကို ပေး၍ ဖဖေကေ အဖှားနားမှာ သှားထိုငျသညျ။ အဖှားပျေါမှာ ထိုငျနသေော အကောငျကွီးကို ဖဖေေ မွငျပုံမရ။ လငျးထကျကတော့ နောကျလှညျ့မကွညျ့တော့ပဲ နှားထိနျးကွိုးကိုသာ အာရုံထား၍ ထိနျးနလေိုကျသညျ။ အဖိုးနှငျ့ အဖှားအိမျရောကျတော့ ပိနျလှီနသေောအဖှားကို လှညျးပျေါမှ သယျခရြာ ဖဖေတေဈယောကျတညျး မ မနိုငျသဖွငျ့ လူလေးယောကျ ဝိုငျးသယျကာ အိမျပျေါ ပို့ခဲ့ရသညျ။ ဘယျနိုငျမတုနျး အဖှားပျေါမှာ သရဲကွီးက မိနျ့မိနျ့ကွီး ထိုငျနတောကိုး။ ထို သရဲကွီးကို ဘယျသူမှ မမွငျ လငျးထကျတဈယောကျသာ မွငျနရေသညျ။ ထိုနကေ့ စပွီး အဖှားနားကို လငျးထကျ မကပျ။ တခွား မွေးမွဈမြားကတော့ အဖှားချေါလငျြ အနားသှားကွသညျ။ ဆေးရုံတှငျ ယဲ့ယဲ့လေးသာ ကနျြတော့သော အဖှား ဒျေါတငျရီမှာ အိမျပွနျရောကျကတညျးက အခွအေနေ ပွောငျးလဲသှားသညျ။ ဆေးရုံက တပတျ၊ တဈလသာ ခံမညျဟု ပွောသျောလညျး အဘှားမှာ ပို၍ပငျ ကနျြးမာလာသလိုပငျ။ ထိုငျနိုငျ ၊ ထနိုငျ စကားပွောနိုငျလာသညျ။ အစားအသောကျကို သာမနျလူထကျပငျ စားနိုငျလာသညျ။ အသားဟငျးမြား စားရသညျ့နတှေ့ငျ အဖှား မှာ ထူးခွားစှာ ထူထူထောငျထောငျ ဖွဈနတေတျသညျ။ အသားဟငျးစားရလငျြ အဖှားမကျြနှာမှာ လနျးဆနျးနသေညျကို တှရေ့တော့ အဖိုးနှငျ့ သားသမီးမြားက မရှိရှိသညျ့ကွားက အသားဟငျး ရှာဖှေ ခကျြပွုတျကြှေးမှေးသညျ။ အဓိက အဖှားကွိုကျသော အသားဟငျးမှာ ဝကျသား၊ အမဲ သားဖွဈသညျ။ .... ကိုရှသေနျး... ဒီနေ့ ရှာထဲက မွဒငျတို့အိမျမှာ ဝကျပျေါမယျတဲ့... ၂ပိဿာလောကျ သှားဆှဲခဲ့လေ... ကြုပျစားခငျြလိုကျတာတျော.... ရှာထဲသှားလာနသေူတှကေ ဘာသတငျးမှ မရသေး၊ အဖှားဒျေါတငျရီတဈယောကျ ဘယျက သတငျးရသညျ မသိ။ .... သား....စိုးလှငျ... ဟိုဘကခြောငျးဝ ရှာမှာ...အမဲပျေါမယျလို့ကွားတယျ...့အမစေားခငျြတယျကှယျ.... အဖှား ဒျေါတငျရီ ဖဖေကေို့ ပူဆာတာ ကွားလိုကျသညျ။ ..... ဟာ... မမေကေလညျး...သားမနကျကပဲ... အဲ့ဒီက ပွနျလာတာ... ဘာသံမှ မကွားခဲ့ပါဘူးဗြာ... ဖဖေကေ ပွောတော့ အဖှားက ဒေါသ ထှကျဟနျဖွငျ့ ဖဖေကေို့ ကွိမျးမောငျးတော့သညျ။ ..... ဒီမနကျ ဟိုဘကျရှာက ဖိုးသိုကျတို့ နှားကွီး ပိုးထိပွီး သသှေေားတယျ... အဲ့ဒါ လပေးနဲ့ ပျေါရောငျးမယျ လုပျနတော... နငျ မိဘကို မကြှေးမှေးခငျြလို့ ရှောငျဖယျ နတော မဟုတျလား... မိဘ ကြေးဇူး မသိတဲ့ကောငျ... သှား အခု အမဲသား သှား ဝယျလာခဲ့... မဝယျပေးရငျ...နငျနဲ့ငါ သိမယျ.... ဘယျတုနျးကမှ ကွမျးကွမျးတမျး မပွောတတျသော အဖှား ပါးစပျမှ ဒေါသတကွီး ကွိမျးဝါးသံမြား ထှကျလာသညျ။ ဆံပငျဖားလြားခလြကျြ မကျြးဝနျးမြားက နီနီရဲရဲနှငျ့ ဖဖေကေို့ အံကွိတျကွညျ့နသေညျ့ အဖှားပုံစံမှာ ကွောကျစရာ ကောငျးလှသညျ။ ဖဖေကေ ဘာမှ မပွောတော့ပဲ ခြောငျးဝရှာကို သှားသညျ။ တကယျပငျ ဦးဖိုးသိုကျနှားကွီးမှာ မနကျက မွကျစားရငျး ပိုးထိ သဆေုံးသဖွငျ့ ပျေါ၍ ရောငျးသညျနှငျ့ ကွုံရလသေညျ။ ဖဖေကေ အံသွတကွီးနှငျ့သာ အမဲသား တဈတှဲ ဝယျ၍ ပွနျဆှဲလာခဲ့ရလသေညျ။ တရှာလုံး မညျသူမြှ မရသေးသော သတငျးကို အိမျပျေါထိုငျနသေညျ့ အဖှားက ဘယျလို ကွားသညျ မသိ။ အသားဟငျးမခကျြသညျ့ နမြေ့ားဆို အဖှားပါးစပျမှာ လူနာဟုပငျ ထငျစကာ မရှိ၊ တဗဈြတောကျတောကျ ပွောဆိုနတေတျသညျ။ .... ဟဲ့... မယျအုနျး... နငျ့အိမျမှာ ငါးဟငျး ခကျြတယျ မဟုတျလား... ငါ...စားခငျြတာအေ... တခှကျလောကျ လာပို့ပါလား... .... ဟုတျ...ဟုတျ... အဈမတငျရီ... ကမြ... လာပို့ပေးမယျ.... အိမျရှကေ့ ဖွတျသှားသူ မခနျြ ဟငျး ပို့ခိုငျးတတျသညျ။ ဘယျသူ့အိမျ ဘာဟငျးခကျြတာ အဖှားက ထိုငျရာ မထ သိနတေတျသညျ။ ဒါတှကေ လူကွီးတှေ ပွနျပွော နကွေသညျကို ကွား၍ လငျးထကျသိရခွငျးသာ။ အဖှား ဆေးရုံက ပွနျလာကတညျးက အဖှားတို့ အိမျပျေါ လငျးထကျ လုံးဝ မတကျတော့။ မိဘတှနှေငျ့ လိုကျသှား တိုငျး အိမျအောကျ မှာသာ ရှယျတူ ဝမျးကှဲ ညီကို မောငျနှဈမ မြားနှငျ့ သာ ဆော့ကစားနတေတျသညျ။ တဈရကျတော့ .... သားလေး... ပူတူး....သားအဖှား ချေါနတေယျ... သား နဲ့ မတှတေ့ာ ကွာလို့ တှခေ့ငျြလို့တဲ့... အဖှား နား သှားလိုကျပါဦး... ဖဖေနှေငျ့ မမေကေ လငျးထကျကို ချေါကာ ပွောလာသညျ။ .... မသှားဘူး...မသှားဘူး... လငျးထကျ အကွောကျအကနျ ငွငျးသညျ။ .... သှားလေ... ပူတူးလေး... ကိုယျ့အဖှား ဆီကို... သားအဈကိုတှေ... ညီတှေ... ညီမတှတေောငျ အဖှားနား...ကပျနတောပဲဟာ... ကွီးကွီး၊ ဒျေါဒျေါ၊ ဦးလေး တျောစပျသညျ့ ဆှမြေိုးမြားကပါ ဝိုငျးပွောသျောလညျး လငျးထကျက မသှား။ ပကေပျနသေညျ။ အတငျးဆှဲချေါကွတော့ အာခေါငျခွဈအောငျ အျောငိုသညျ။ .... ကိုယျ့အဖှားနား...ဘာလို့ မသှားတာလဲ... အဖှား စိတျမကောငျး ဖွဈနမေယျလေ... သားလေး... အဖှား စိတျမကောငျးဖွဈရငျ သားလေး ငရဲကွီးလိမျ့မယျ... မိဘတှကေ တိုးတိုးတိတျတိတျ ဆုံးမသညျ။ .... အဲ့ဒါ သားအဖှား မဟုတျဘူး...သရဲကွီး... ကွောကျစရာကွီး... သား...ကွောကျတယျ.... လငျးထကျ စကားကွောငျ့ အားလုံး မကျြစိ မကျြနှာတှေ ပကျြကုနျကွသညျ။ .... ပူတူးလေး...ဘာဒပွေောနတောလဲ... မပွောကောငျးတာတှေ မပွောရဘူးလေ... မဟုတျတာ ပွောရငျ... အဖိုးရိုကျမှာ... ....ဟုတျပါတယျ ဆိုမှ ... ဟိုမှာ မတှကွေ့ဘူးလား... အဖှားပျေါမှာ ခှထိုငျပွီး... အဖှားလညျပငျးကို ညှဈထားတဲ့ သရဲကွီး... အမှေးကွီးတှကေို အရှညျကွီးပဲ... သားကို လကျယကျပွီး ချေါနတော... ခဏ... ခဏပဲ... သား..ကွောကျလို့... အိမျပျေါတောငျ မတကျဘူး... လငျးထကျက အိမျပျေါမှ အဖှားရှိရာ လကျညိုးထိုးကာ ငိုသံပါကွီးနှငျ့ ပွောလိုကျတော့ အားလုံး ထိတျလနျ့ ကုနျကွသညျ။ အဖိုးက ဖဖေကေို့ တိုးတိုး တိတျတိတျ လှမျးချေါသညျ။ .... စိုးလှငျ... မငျး...တျောကဆော့ ရှာက ဆရာကွီး ဦးထိနျကို သှားပငျ့ကှာ... ငါ့မွေး ပွောပုံနဲ့ မတငျရီပုံစံကို ငါ မသင်ျကာဘူး... စဈကွညျ့ရအောငျ... ညနမှော ဖဖေနှေငျ့အတူ ခေါငျးပေါငျးပေါငျး၍ လှယျအိတျတဈလုံး လှယျထားသော လူကွီး တဈဦးရောကျလာသညျ။အဖိုးနှငျ့ သကျတူ ရှယျတူ ခနျ့ရှိသျောလညျး အဖိုးက ဆရာကွီးဟူ၍ ချေါသညျ။ ဆရာကွီး အိမျပျေါတောငျ မတကျရသေး အိပျယာထဲ မှ အဖှားက ရုတျတရကျ ထ,ထိုငျကာ ဆရာကွီး ဦးထိနျကို လကျညိုး ငေါကျငေါကျထိုး၍ .... နငျ ငါ့အိမျ...ဘာလာ လုပျတာလဲ... မလာနဲ့ သှား... ငါ့ ကို လာ မစမျးကွနဲ့နျော...ဟငျး...ဟငျး... ဟု ထအျောကာ ဒေါသတကွီး မောငျးထုတျတော့သညျ။ အဖှား ဒေါသ ကွီးလငျြ ကွောကျစရာ ကောငျးလှသညျ။ မကျြလုံးမြားမှာ နီရဲလာက လူသတျတော့မညျ့ဟနျ...။ အဖိုးက ဆရာကွီးဖိုးထိနျအား ခွရေငျးဘကျမှ သမီးဖွဈသူ ဒျေါကွီး သနျးဝငျး အိမျချေါသှားသညျ။ ညရောကျတော့ ဒျေါကွီးသနျးဝငျး အိမျမှာ လူစညျသှားသညျ။ လငျးထကျတို့ ကလေး တဈသိုကျလညျး ဘာလဲဟူသော သိခငျြဇောဖွငျ့ စပျစုကွသညျ။ ဆရာကွီးဦးထိနျဆိုသူက ဘုရားစငျ ၊ တှငျ ဆီးမီးမြားထှနျး အာရုံပွု ရှဈခိုးကနျတော့ပွီး သူ့ရှတှေ့ငျ လကျဖွငျ့ ကွမျးပွငျကို ထောကျ၍ စညျးဝိုငျး ပုံသဏ်ဍနျ ဝိုငျးလိုကျသညျ။ ထိုစညျးဝိုငျး အတှငျး ဒျေါကွီး သနျးဝငျးအား ထိုငျစပွေီး ပါးစပျမှ မနျးမှုတျနသေညျ။ ခဏနတေော့ ဒျေါကွီး သနျးဝငျး၏ ခန်ဓာကိုယျမှာ တဆတျဆတျတုနျလာပွီး တစုံတရာ ပူးကပျလာလတေော့သညျ။ ဆံပငျမြားကို ဖားလြားခကြာ မကျြလုံးမြားက ဒေါသ ခြောငျးခြောငျးထှကျဟနျဖွငျ့ အားလုံးကို ဝကွေ့ညျ့ သညျ။ .... ငါ့ကို...ဘာလို့...နှောကျယှကျကွတာလဲ...ဟငျး...ဟငျး...သခေငျြကွလို့လား... ဒျေါကွီး သနျးဝငျး ပါးစပျမှ အသံသွသွကွီး ထှကျလာသညျ။ .... မငျး...ဘယျသူလဲ...ဘယျကလဲ... ဆရာကွီးက မေးတော့ ပထမ မဖွေ။ ဆရာကွီးနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြမှ လူမြားကို ရနျပွု ခငျြဟနျ ထခုနျပေါကျ သောငျးကနျြးတော့သညျ။ ဆရာကွီးက ဂါထာတှရှေတျ၊ မနျးကွိုးတှေ လညျပငျးခညျြတော့မှ အနညျးငယျ ငွိမျသှားသညျ။ .... ငါက... ဘုနျးကွီးကြောငျး ရကေနျညောငျပငျက... သရဲ... အစားစားခငျြလို့ ကပျပွီး နေ နတော... ဆရာကွီး ၏ မနျးကွိုး ဂါထာမြားက အတျောစှမျးဟနျတူသညျ။မေးသမြှ ကို ဖွသေညျ။ သူသညျ ရှေးယခငျ မွိုငျသာ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှ ဘုနျးကွီးတဈ ပါးဖွဈကာ ပြံလှနျတျောမူတော့ အယူလှဲကာ ညောငျပငျကွီးတှငျ သရဲဖွဈနသေူ တဲ့။ဘှဲ့နာမညျတှတေော့ မပွော။ ဖဖေကေို့ လဖွေတျအောငျ လုပျတာလဲသူ၊ ကိုရငျလေးဆီက အစားလုစားတာလညျးသူ၊ အဖှားခန်ဓာကိုယျမှာ ကပျပွီးနတောလဲ သူ၊ သူ့ကို လငျးထကျ ဘာ့ကွောငျ့မွငျရတာလညျး ဟု ဆရာကွီးက မေးတော့.... လငျးထကျသညျ အရငျဘဝက သူနထေိုငျရာ ညောငျပငျနှငျ့ ကပျရပျ ညောငျပငျမှ သရဲ တဈကောငျဖွဈကာ ရငျးနှီးကွသညျဟု ဆိုသညျ။လငျးထကျ သရဲဘဝဖွငျ့ ညောငျပငျကွီးတှငျ နထေိုငျရငျး မွိုငျသာ ရှာဘုနျးကွီးကြောငျးသို့ မရပျကုနျး ဆရာတျော ကွှလာစဉျ ကွညျညိုလှသညျ ဆိုပွီး အပငျမှ ဆငျးကနျတော့၊ မရပျကုနျး ဆရာတျော ဟောသော တရားမြားကို သှားနာယူရငျး ကြှတျတနျးဝငျကာ ဘုနျးကွီးကြောငျး အနီးလယျကှကျထဲ နထေိုငျသညျ့ လငျးထကျ အမထေံ ဝငျစားခွငျး ဖွဈကွောငျး ၊ ထို့ကွောငျ့ သရဲ ဘဝက ရငျးနှီးသူမို့ ကိုယျထငျပွ၍ လငျးထကျကို နှုတျဆကျခွငျး ဖွဈကွောငျး ပွောသညျ။ထို မရပျကုနျးဆရာတျောမှာ မညျသူမြှ မသိသော ရဟန်တာတဈပါး ဖွဈသညျဟု လညျး ပွောသညျ။ ..... ဦးရှသေနျး....ရော့...ဒီ... မနျးကွိုးကို လူနာ လညျပငျးမှာ သှားဆှဲထားပေး...ဒီရမေနျးကိုလဲ... ခန်ဓာကိုယျအနှံ့ ဖနျြးပေးခဲ့....ဒါမှ..ဒီသရဲကောငျ...လူနာကို ပွနျဝငျကပျလို့ မရမှာ... ဆရာကွီးက ရမေနျးတှေ မနျးကွိုးတှေ အဖိုးအားပေးလိုကျတော့ ဝငျပူးနသေော သရဲ ခြုံးပှဲခြ ငိုတော့သညျ။ သူ ဝငျပူး ခိုကပျ စားသောကျဖို့ ခန်ဓာ မရှိတော့ သညျမဟုတျလား။ ..... မငျး...နရောမှာ...မငျး...အေးအေးဆေးဆေး ပွနျနေ... သူတပါးကို မနှောငျ့ယှကျနဲ့... အလှူအတနျးတှရှေိလို့ အမြှ အတနျးဝရေငျ.. သာဓုချေါပွီး... ဒီမကောငျးတဲ့ ဘဝက ကြှတျအောငျလုပျ.... ဆရာကွီးက အမိနျ့ပေး၍ ပူးကပျရာမှ ပွနျထုတျသညျ။ သရဲ က မထှကျခငျ လငျးထကျ ဖခငျကို သတိပေး ပွောသှားသေးသညျ။ ဘုနျးကွီးကြောငျး အနီး လယျကှကျအား စပါးစိုကျဖို့ အသုံးမပွုရနျ။ ညနစေောငျးလငျြ မွိုငျသာဘုနျးကွီးကြောငျး စတေီ ၏ အရိပျမှာ ထိုလယျကှကျအတှငျး အရိပျကြ သဖွငျ့ လယျလုပျရနျ မသငျ့တျော။ဘုရားမွေ အဖွဈ ဘုနျးကွီးကြောငျးကို လှူဒါနျးရနျ ၊ သူ သတိပေးခဲ့သျောလညျး ဂရု မစိုကျသဖွငျ့ ဖဖေကေို့ ဒုက်ခပေးခွငျးဖွဈကွောငျး ပွောကာ ဝငျပူးရာ မှ ထှကျသှားခဲ့သညျ။ ထိုညတှငျပငျ အဖှားမှာ ဆုံးပါး သှားခဲ့ပါသညျ။ အဖှားဆုံးသညျနှငျ့ မခံမရပျနိုငျအောငျ အပုပျနံ့မြား ထှကျလာသညျ။ အစက ပွညျ့ပွညျ့ဖွိုးဖွိုး ရှိလာသော အဖှားမှာ ခကျြခငျြးပငျ အသားတဈစကျမှ မရှိတော့သကဲ့သို့ အရိုးပျေါမှာ အရပွေားလေး တငျရုံသာ ရှိသညျ။ .... လူနာက ဆုံးတာ ကွာနပွေီ... သူရဲ့ ရုပျမှာ..သရဲက ဝပျကပျမှီခိုပွီး စားသောကျနလေို့ မသသေေးသလို ဖွဈပွီး နလံထူနတော...ပွောရရငျ ဖုတျဝငျတာပေါ့ကှာ... ...... မောငျစိုးလှငျ... မငျးတို့ကလေးကိုလညျး... ဂရုစိုကျ... ကံနိမျ့လို့...တစ်ဆသေရဲကို မွငျရတာ... ရှငျပွုပေးလိုကျတာ ကောငျးမယျ..... ဟု ဆရာကွီး ဦးထိနျက ပွောသှားသညျ။ အဖှား ဆှမျးသှတျတှေ ဘာတှေ ပွီးလို့ မကွာခငျ လငျးထကျ ကိုရငျ ဝတျခဲ့ပါသညျ။ ဖဖေကေလညျး စတေီ အရိပျကသြော လယျကို ဘုရားမွအေဖွဈ အဖှားကို ရညျစူး၍ မွိုငျသာ ဘုနျးကွီးကြောငျးကို လှူဒါနျးလိုကျသညျ။ မွိုငျသာ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျ ကိုရငျ ဝိစာရ အမညျဖွငျ့ ကိုရငျ ဝတျခဲ့သော လငျးထကျမှာ ဉာဏျကောငျးလှသဖွငျ့ ကြောငျးထိုငျဆရာတျောက ခဈြသညျ။ ဆရာတျော အံခိုငျးသော တရားစာ မြားကို ကိုရငျ ဝိစာရက သူမြားနှငျ့ မတူ အခြိနျတို အတှငျး ပွနျအံ နိုငျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဆရာတျောက ဦးစားပေးသညျ။ ကိုရငျ ဝိသာရ တရားစာ ကကျြလငျြ ရကေနျကွီးရှိ ညောငျပငျအောငျတှငျ ထိုငျကာ စတေီတျောကွီးကို ကွညျ့ ၍ ကကျြသညျ။ ထို့ကွောငျ့လားတော့ မသိ။ စာရမွနျသညျ။ တဈညတော့ ကိုရငျ ဝိစာရ အိပျမကျ မကျသညျ။ .... မငျး ကို ကိုယျထငျမပွနဲ့ဆိုလညျး... မပွပါဘူးကှာ... ငါ့ညောငျပငျအောကျတော့ တရားစာလာ မကကျြပါနဲ့... ငါ နလေို့ မရဘူးကှ... ထှကျ..ထှကျ..ပွေးနရေတယျ... ဟု ညောငျပငျပျေါမှ လှမျးပွောနသေော အမှေးရှညျရှညျ နှငျ့ သရဲကို မွငျမကျသညျ။ ထို့နောကျတော့ ကိုရငျ ဝိစာရ ညောငျပငျအောကျမှာ စာသှားမကကျြတော့ပဲ စတေီ အုတျမွဈပျေါမှာသာ ထိုကျ၍ တရားစာ အံတော့လသေညျ။ တဈလခနျ့ကွာတော့ လငျးထကျ ကိုရငျ ထှကျလာခဲ့သညျ။ ထိုအခြိနျမှ စ၍ လငျးထကျမှာ ညောငျပငျမှ သရဲကွီး၏ အရိပျအယောငျကို မမွငျရတော့သလို ညောငျပငျကွီးမှာ သရဲခွောကျသညျဟုသော သတငျးလဲ တဖွညျးဖွညျး ပြောကျကှယျကာ ပုံပွငျလောကျသာ ကနျြတော့လသေညျ။ ထိုမြှသာ..... ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ပွီးပါပွီ။
အမှားအယှငျး ၊ လိုအပျခကျြမြားကို သညျ့ခံဖတျပေးပါရနျ ။
Credit: ခဈြသား မာရျနတျ(Y,A,P)